Serge Aurier Oo Walaalkii Toogasho Lagu Dilay Iyo Murugada Kubadda Cagtu Ku Waabariisatay Saaka - Gool24.Net
Serge Aurier Oo Walaalkii Toogasho Lagu Dilay Iyo Murugada Kubadda Cagtu Ku Waabariisatay Saaka
Kubadda cagta ayaa saaka ku waabariisatay murugo iyo baroor-diiq hadhaysay xiddiga reer Ivory Coast ee Serge Aurier, kaas oo walaalkii lagu dilay toogasho salaaddii hore ee saaka.
Waqti ku beegnayd 5am (Salaaddii subax) ayaa la sheegay in xabbad lagu dhuftay walaalka la dhashay Serge Aurier oo la sheegay inay da’diisu ahayd 26 jir.
Falkan oo ka dhacay magaalada Toulouse ee waddanak Faransiiska ayey wararka hordhaca ah sheegayaan in aan la garanayn cidda geysatay dilka, hase yeeshee ay boolisku meydkiisa ka qaadeen goobta toogashadu ka dhacday.
Dadka deggan xaafadda dilku ka dhacay ayaa la sheegay inay la xidhiidheen booliska oo ay ku wargeliyeen in qof lagu dhuftay xabbad uu meydkiisu dhulka yaallo, waxaana markiiba halkaas gaadhay ciidamada booliska ee Faransiiska, waxaanay markiiba xaqiijiyeen inuu yahay nin 26 jir ah oo ay walaalo yihiin difaaca Tottenham iyo xulka qaranka Ivory ee Serge Aurier.
Warbaahinta Faransiiska ayaa warar hordhac ah oo ay baahiyeen ku sheegay in xabaddu ay kaga dhacday caloosha oo markiiba ay naftu ka baxday, iyadoo qofkii dilka geystayna uu goobta ka baxsaday.
Dilkan argagaxa leh ayaa loo badinayaa inuu ka dhacay bannaanka hotel lagu caweeyo, kaas oo ay ilaa subaxnimadii hore dadku ku sugnaayeen, iyadoo uu Aurier walaalkii markii uu kasoo baxay ay xabbaddu ku dhacday.
Serge Aurier oo xalay ku seexday farxadda guushii ay kooxdiisa Tottenham ka gaadhay Arsenal oo ay 2-1 ku garaaceen ayaa kusoo toosay murugada geerida walaalkii.